Dhimasho & dhaawac ka dhashay Shilal ka dhacay dowlad degaanka Soomaalida | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dhimasho & dhaawac ka dhashay Shilal ka dhacay dowlad degaanka Soomaalida
Wararka aan ka helayno Dowlad Degaanka Soomaali Galbeed ayaa ku warramaya in goordhaweyd halkaasi ay ka dhaceen shilal is xig-xigay oo kakhsaaro badan dhaliyay, waxaana la helayaa warar dheeeraad ah oo ku aaddan shilalkaasi.
Shilka hore ayaa ka dhacay Duleedka Magaalada Qabridaharre, waxaana ka dhashay Khasaaro soo gaaray dadkii rakaabka ahaa ee sarnaa gaariga shilka galay.
Intaa kadib waxaa Dhaawacyadii iyo dadkii ku waxyeeloobay Shilka loo qaaday Magaalada Jig-jiga ee xarunta Dowlad Degaanka Soomali Galbeed, balse Gaadiidka Gurmadka ahaa ee dhaawacyada siday ayaa la sheegay in uu Shil kale galay, taasi oo sababtay in Khasaaruhu sii bato.
Labada shil ayaa waxaa ka dhashay Dhimasho iyo dhaawac, waxaana la xaqiijiyay in shilka dambe ee uu galay gaadiidka Gurmadka ay ku dhinteen Labo ruux oo shacab ah.
Wali ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka oo ku aaddan shilalka khasaaraha badan dhaliyay ee maanta ka dhacay Dowlad degaanka, waxaana inta badan dhaca shilalka noocaan ah, iyadoo loo sababeeyo Qaar kamid ah waddooyinka oo bur-bursan iyo wadayaasha Gaadiidka kala duwan oo Xawaare sare ku wada Gawaarida.
Previous articleNorway oo dib u fureysa Safaaradeedii Magaalada Muqdisho
Next articleWafdi ka socda QM oo gaaray degmo u go’doonsan Al-Shabaab